हाम्रो सिनेमा सोच- विचार - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो सिनेमा सोच
सोच बदल्न र समाजमा भइरहेको परिवर्तनलाई श्रव्यदृश्य सामग्रीमा दर्साउन न पैसा कम धेरै कमाउनुले फरक पार्छ, न करिअरमा शक्तिशाली हुनु नहुनुले ।
आश्विन १२, २०७५ सावित्री गौतम
काठमाडौँ — यो साता हिन्दी फिल्म उद्योगकी प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमीको निधन भयो । कल्पनालाई हिन्दी सिनेमामा महिलालाई ‘हिरोसंँग फूलबारीमा नाच्ने केटी’को भूमिकाबाट बाहिर निकालेर शक्तिशाली महिलाका रूपमा चित्रण गरेको श्रेय जान्छ ।
उनले सन् १९८६ मै निर्देशन गरेको ‘एक पल’ मा सशक्त भूमिकामा शबाना आजमीलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कल्पनाका फिल्महरू रुदाली र दमनमा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेका क्रमश: डिम्पल कपाडिया र रविना टन्डनले राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
कल्पनाले हिरोसँंग फूलबारीमा नाच्ने केटीकै भूमिका गरिरहेका मूलधारका भनिने अभिनेतृमा भएको सशक्तताको परख गरिकन त्यसलाई निर्देशन क्षमताले उजागर गरेकी थिइन् । उनीहरूको करिअरलाई समेत नयाँ उचाइ प्रदान गरेकी छन् । रुदालीमा डिम्पल र दमनमा रविनापछि चिंगारीमा अभिनय गरेकी पूर्व विश्व सुन्दरी सुस्मिता सेन यसकै प्रमाण हुन् ।
मूलधारका हिन्दी फिल्मका सफल अभिनेता निर्माता आमिर खान सामाजिक विषयमा आधारित टेलिभिजन कार्यक्रम सत्यमेव जयतेका पनि निर्माता र सञ्चालक हुन् । सत्यमेव जयतेकै एउटा एपिसोडमा उनले आफूले काम गरेका फिल्ममा महिलाको वस्तुकरण गरिएको स्वीकार गरेका थिए ।
तर उनले करिअरको सुरुवातदेखि नै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा काम गर्न भने मानेनन् । ‘मेरो कारण कुनै नयाँ पुस्ताले कुलत नसिकोस् भनेर सचेत रहनु कलाकारका रूपमा मेरो सामाजिक जिम्मेवारी हो,’ २५ वर्षअघि नै उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । कलाकारका रूपमा निकै सचेत मानिने उनले अभिनय गरेको सफल सिनेमा दंगल (यद्यपि त्यो जीवनीमा आधारित थियो) को प्रशस्त आलोचना पनि भएको थियो । तर समीक्षकमाथि उनी जाइलाग्न गएको पढ्न–देख्न पाइएन । कल्पनाले व्यावहारिक रूपमै महिलालाई शक्तिशाली पात्रका रूपमा चित्रण गरिन् भने आमिरले बोलीले भए पनि महिलाले सम्मानजनक चरित्र नपाएको स्वीकार गरे ।
हिन्दी र त्यसकै धेरै प्रभावमा रहेर बनाइने अधिकांश नेपाली सिनेमामा महिलालाई ‘हिरो’ भनिने पात्रले सुरुमा ‘ग्याङ’ लिएर लखेट्छ, सताउँछ, दुव्र्यवहार र यातना दिन्छ । अनेक लाञ्छना लाग्ने गीतसमेत गाउँछ । हिंसात्मक व्यवहारबाट हिरोइन भाग्दै बाँच्दै हिँंड्छे । यत्तिकैमा सिनेमामा भिलेनको प्रवेश हुन्छ, जो हिरोभन्दा बढ्ता हिंस्रक हुन्छ । उसले हिरोइनलाई बलात्कारको प्रयाससमेत गर्छ । अचानक हिरो प्रकट भएर बचाउँछ र अघिसम्म दुव्र्यवहार गरिरहेको व्यक्ति हिरोइनको नजरमा एकाएक सज्जन बन्न पुग्छ । भिलेनभन्दा कम हिंस्रक भएकै आधारमा हिरोइनको नजरमा ऊ पास हुन्छ । हिरोइन ‘उसकी’ बन्न पुग्छे । वर्षौं पुरानो यो सूत्रबाट नेपाली फिल्म मुक्त हुनसकेका छैनन् ।
नेपाली सिनेमा उद्योग सानो भए पनि आफ्नो बलबुतामा आर्थिक सम्पन्नता र नेतृत्वको उदाहरण कायम गरेकी दिपाश्री निरौला वा ऋणमा डुबेको घरलाई सिनेमामा काम गरेको कमाइले उकासेकी केकी अधिकारी जस्ता सशक्त रूपमा व्यक्तिगत जीवन बाँचिरहेका महिला छन् । तर सिनेमामा उनीहरूको त्यो सशक्तताको छेउटुप्पो प्रतिविम्बित भएको पाइँदैन ।
हिन्दी सिनेमामा सम्भ्रान्तता देखाइने सनातन तरिका अनुसार सेरामिकका भाँडामा ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि हिरो अफिस निस्कने तयारी गर्छ । सारी र गहना लगाएकी हिरोइनले टाई मिलाइदिन्छे । सन् २००१ को हिन्दी सिनेमा ‘कभी खुसी कभी गम’ मा यो टाई लगाइदिने नामको ‘प्रेम’लाई नाटकीय देखाइएको छ । पत्नी बनेकी जया बच्चन पति बनेका अमिताभ बच्चनभन्दा निकै होची छिन् । टाई लगाउनु अघि चढ्न पिर्का व्यवस्था गरिएको छ । सिनेमामा जया निकै धनी महिलाका रूपमा देखाइएकी छन् । उनको घरभित्र अन्य श्रम गर्न अरू महिला देखिन्छन् । उनले पतिलाई टाई लगाइदिनुमा अतिरिक्त श्रम गरेको नदेखिएकाले त्यसलाई पिर्कामाथि चढेर भए पनि प्रदर्शन गरिएको ‘माया’कै रूपमा व्याख्या गर्नेहरू स्वतन्त्र छन् ।
सत्र वर्ष पुरानो यही सिनेमाको दृश्यको झल्को दिनेगरी नेपाली टेलिभिजनहरूमा केही समययता एउटा विज्ञापन देखिन्छ । अफिस जान ठिक्क परेको पति (जुन पात्रको भूमिकामा राई जातिका अभिनेता छन्, त्यस समुदायमा महिलालाई खस समुदायमा भन्दा समान छ भनिन्छ) को हातबाट कम्प्युटर लिएर पत्नीले झोलामा राखिदिन्छे, टाई मिलाउँछे र कुनै बैंकका ‘नयाँ सोच’वाला नीतिहरू व्याख्या गर्छे ।
डाइनिङ टेबलमा भएको छोराले भन्छ, ‘मम्मी फोहोरवाला आयो’ र उसकी आमाले ‘सोच बदलौं’ भन्ने आशयका साथ जवाफ दिन्छे, ‘फोहोरवाला त हामी हौं छोरा, ऊ त सफाइवाला हो ।’ जबकि यो संवाद नै नक्कल गरिएको हो । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु गरेको ‘स्वच्छ भारत अभियान’का बेला उनकी आमाले उनलाई भनेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा उतिबेलै यो संवाद भाइरल भएको थियो ।
दुई दशक पुराना दृश्य र चार वर्ष पुरानो संवादलाई ‘नयाँ सोच’ भनेर प्रस्तुत गर्न सक्ने स्क्रिप्ट लेखकलाई कुनै प्रश्न नगरी काम गर्न तयार हुने कलाकारले यात थाहै पाएनन् वा थाहा पाएर पनि वास्ता गरेनन्, त्यो उनीहरूको खुसी । अर्को कुरा, नेपाली फिल्म वा विज्ञापनमा देखाइने ‘सम्भ्रान्त’ घरहरूमा पेसाको बहुलताको विरलै चित्रण पाइन्छ । हजारौं पुरुष र महिला बिहान पाँचै बजे काम गर्न घरबाट निस्कन्छन्, रातिको सिफ्टमा काम गर्नेहरू पनि छन् । होटलमा खाना बनाउने सेफ छन् ।
दिनैभरि हरियो गाउन लगाएर अस्पतालका अपरेसन थिएटरमा बस्ने डाक्टर छन् । दिनैभरि चर्को घाममा हेलमेट लगाएर निर्माण स्थलमा उभिने इन्जिनियर र निर्माण मजदुर पनि छन्, जो टाई लगाउँदैनन् । महिला एकाबिहानै काममा निस्कने घर पनि छन्, जुन घरका पुरुषले खाना पकाएर केटाकेटीलाई खुवाएर, स्कुल पठाएर आफू १० बजे काममा निस्कन्छन् ।
महिलाले घर बाहिरका पैसा कमाइने भनिने कामजस्तै गरी घर भित्रको काम गर्ने छनोट पनि पाउनुपर्छ र घरेलु श्रमको उचित मूल्यांकन गरिनुपर्छ भनेर कैयौंपटक लेखिसकेकाले माथि उल्लिखित विज्ञापनमा महिलालाई गृहिणीका रूपमा देखाइएको कुराको विरोध गरेको होइन भनेर यहाँ स्पष्टीकरण दिइरहन जरुरी ठान्दिनँ । महिला मात्र किन, पुरुषले पनि घर भित्रको काम गरेर बस्छु र पैसा कमाउने काम पत्नीले वा दिदीबहिनीले गरोस् भनेर भन्छ भने उसले रोज्न पाउनुपर्छ ।
तर घरको काम गर्ने महिलालाई ‘यही सुहाउँछ’ र पुरुष भए निकम्मा भनेर चित्रण गरिने खालका श्रव्यदृश्य सामग्रीको निर्माणले जनमानसको मानसिकतामा असर पार्छन् । उक्त विज्ञापनमा पतिको हातमा कप हुन्छ, जसमा उसले चिया वा कफी पिइरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । टाई लगाइदिन र कम्प्युटर झोलामा हालिदिन समेत पर्खेर बस्ने मान्छेले ‘ब्रेकफास्ट’ आफैं बनाएको होला भनेर कल्पना गर्न गाह्रै पर्छ । यस्तो दृश्यले ‘बदलिएको सोच’को सट्टा अतिरिक्त श्रम देखियो भनेर कुनै विज्ञापनको दर्शकले टिप्पणी गर्ने अधिकार अवश्य सुरक्षित हुन्छ ।
कतिपय सामान्य नेपाली घरमै लैंगिक भूमिका बदलिंँदैछन् । बुहारी उठेर दैलो पोतोस् भनेर सासू त के ससुरासमेत आजकल बस्दैनन् । बुहारी नउठ्दै सिमेन्टले बनेको पिंँढीमा झ्यापझुप पानी हालेर पखालिसक्छन् । सहरमा भएकी बुहारी गाउँ आओस् र खेतीकिसानी गरोस् भनेर बस्नुको सट्टा जागिर खाने बुहारीलाई घरको काम र बच्चा हेरिदिन सहयोग होस् भनेर सासूहरू सहर पस्न थालेका छन् । तीस दिन खाइने भनेर आलोचित तीजमै हिजोसम्म माइत गई बुहारीलाई कजाएर ढसमस्स बसेर तीज मनाउने भनेर चिनिएका अमाजूहरू बुहारीलाई आफूकहाँ बोलाएर दर खुवाउन थालेका छन् ।
आंशिक रूपमै सही, बदलिँंदै गएका नेपाली घरका यस्ता दृश्यलाई आफ्ना कृतिमा प्रतिविम्बित गर्दा कुनै कलाकर्मीलाई घाटा हुँदैन । तर स्टेरियोटाइपलाई ‘प्रेम’ हो भनेर जिद्दी गर्नका लागि कुनै कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा कसैले गरेको ‘तिम्रै सोच न्यून हो’ भन्ने तहको टिप्पणीलाई लाइक गर्ने हदको सहारा लिनुपर्ने भने दयनीय स्थिति हो ।
सोच बदल्न र समाजमा भइरहेको परिवर्तनलाई श्रव्यदृश्य सामग्रीमा दर्शाउन न पैसा कम धेरै कमाउनुले परक पार्छ, न करिअरमा शक्तिशाली हुनु नहुनुले । भारतमा कंगना रनावतले करिअरको सुरुदेखि नै छाला गोरो पार्ने क्रिमका विज्ञापनमा काम गर्न मानिनन् । शाहरूख खानलाई बादशाह भनिन्छ र पनि उनले फेयर एन्ड ह्यान्डसमको विज्ञापनमा काम गर्न छाडेका छैनन् । त्यसैले यसमा न पैसाको कुरा छ, न शक्तिको । कुरा उही ‘सोच’को मात्रै हो । कलाकार भएर कसैले आफूलाई समाजको अंगको रूपमा स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्नेमात्रै फरक हो ।
भारतमै पनि कमर्सियल सिनेमामा नयाँ आयाम थपिँंदैछन् । महिलाको यौन स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने ‘लिपिस्टिक अन्डर माई बुर्खा’ बनेको छ, राति क्लबमा गएर रक्सी खाएका महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुतर्कको खण्डन गरिएको र यौन हिंसाका सिकार महिलालाई न्याय दिलाइएको ‘पिंक’ बनेको छ । स्यानिटरी प्याडको महत्त्व पत्नीलाई बुझाउन र गाउँ–गाउँमा मितव्ययी दरमा पुर्‍याउन लामो संघर्ष गर्ने व्यक्तिको कथा ‘प्याडम्यान’ बनेको छ ।
बिहे गरेर भित्रिएको घरमा शौचालय नभएका कारण घर छाडेर जाने बुहारी र सिंगो गाउँ र शक्तिशाली पञ्चायतलाई नै शौचालयको महत्त्व बुझाएर पत्नी ल्याइछाड्न सफल भएको उसको पतिको कथा भएको ‘ट्वाइलेट एक प्रेमकथा’ बनेको छ । अफिस हिंँड्न हतार हुन्जेल टाई लगाउन पत्नीलाई कुरेर बस्ने र घर फर्काउन सिंगो गाउँकै लागि शौचालय बनाउने काममा महिनौं खट्ने दृश्यमध्ये कुन ‘प्रेम’ हो, स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो देशको शो बिजनेसले कम्तीमा यिनै कुराको ‘कपी’ गरे पनि केही चित्त बुझाउने बाटो हुने थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा चौबिस घन्टै झुन्डिएर बस्नेहरूलाई विश्लेषक सीके लालले ‘लिजर क्लास ग्रुप’ नाम दिएका छन । बेरोजगारी, असुरक्षा, हत्या, हिंसाबाट आक्रान्त देशमा बस्ने निराश जनताको कुनै हिस्सालाई सामाजिक सञ्जालमा पाउने नोटिफिकेसन पनि ठूलै सम्पत्ति लाग्दो हो, चाहे त्यो कसैमाथि गरिएको अश्लील गालीगलौजमा हौस्याइएको किन नहोस् । संसारभरि यथास्थितिको विरोध र समानताको पैरवी गर्नेलाई समाज भाड्ने र विखण्डनकारी भनिन्छ ।
निधारमा दसथरीको लाञ्छना बोकेर लड्नेहरूले ल्याएको परिवर्तनको फाइदा फेरि सिरकभित्र लुकेर गाली गर्नेहरूलाई पनि मिलिहाल्छ । यो कुनै ठूलो र नौलो कुरा होइन । तर कुनै कलाकारले आफ्नो काममा यथास्थिति चाहँदैन भने उसले समाजका बदलिंँदा मान्यता र दृश्यबारे भइरहेका बहसप्रति आफूलाइ खुला राख्नैपर्छ । दुई दशक अघिकै प्रेम जप्न मन लागेचाहिँ फेरि कसैलाई जबर्जस्ती गर्न सकिँंदैन ।
बलिउड ठूलो छ र धेरै थरीका मान्छे छन् । सोच कहिले नबदल्ने, नयाँ सोच भएका वा पछि गएर सोच बदलेका पनि छन् । त्यहाँ आज यसले गजब राम्रो काम गर्‍यो भनेर सोच्यो, भोलि अर्कोले उस्तै निम्नकोटीको काम पनि गरेको हुन्छ । अधिकांश नेपाली सिनेकर्मी बलिउड वा हलिउडकाले जेसुकै बनाए पनि स्वीकार्ने, हामीलाई गाली गर्ने भनेर बचाउ गर्छन् ।
आफ्नो जीउमा कुपोषण छ वा घाउ लागेको छ भने मान्छेले आफ्नै जीउको उपचार गर्छ । फलानो अर्को मान्छेको जीउमा त मेरोभन्दा धेरै घाउ छ भनेर निश्चिन्त भएर बस्दैन । सिनेमा, साहित्य, कलाले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तु गतिलो होस्, ढंगको होस् भनेर एउटा नागरिकले चिन्ता र टिप्पणी गर्न पाउँछ ।
सिनेमा काल्पनिक कथा हो, तर अत्यन्त स्वैरकाल्पनिक बाहेक अधिकांश सिनेमा समाजकै घटना र पात्रबाट टिपेर बनाइने हुन् । त्यसरी समाजका घटना उतार्दा साँचो चित्रण होस् र कुनै वर्ग, क्षेत्र समुदायलाई लाञ्छित नगरियोस् भनेर सचेत हुनु कलाकर्मीको दायित्व हो । तर हामी अझै त्यो युगमा छौं, जहाँ सिनेमा विदेशमा प्रदर्शन गरेर लाखौं डलर सोहोर्ने निर्माताले आफ्नो सिनेमाबारे समीक्षा गरेकी एउटी २२ वर्षकी विद्यार्थीलाई ‘डलर खाएर कलर बदल्ने नारीवादी’ भनेर गाली गर्छन् । आफ्नै क्षेत्रकी सहकर्मीलाई ‘गेट वेल सुन’ भन्छन् । आशा गरौं, नेपाली श्रव्यदृश्य क्षेत्रमा छिटै नयाँ सोचवाला केही मान्छेको पदार्पण होस् वा पुरानैले सोच बदलेर नयाँ काम गरून् ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७५ ०७:४५
समाजको संरचनाले महिलालाई सिकार र पुरुषलाई सिकारीको रूपमा चित्रण गरेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने र महिला भनेका तल्लो दर्जाका लिंग हुन् भन्ने आशयले निर्मित अनगिन्ती उखान, टुक्का, गीत र उद्धरणले हाम्रो चेतन अवचेतनमा वर्षाैंदेखि शासन गरेका छन् ।
श्रावण १९, २०७५ सावित्री गौतम
काठमाडौँ — बिहान ‘बलात्कारीको लिंगछेदन गरौं’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्किसकेपछि हामी दिउसो शिवलिंगलाई अँगालो हालेर फोटो खिच्छौं र, बेलुका फेरि उही नाराको साथमा हाजिरी जनाउँछौं । लिंग भनेको सर्वोच्च हो, पूजा गर्नलायक हो भनेर छोरीहरूलाई सिकाइसकेपछि हामी छोरा नभएर बाबुको किरिया गर्नबाट रोकिएकी छोरीको समर्थनमा स्टाटस लेख्छौं ।
भदौमा फेरि लोग्नेको लामो आयुुको लागि व्रत राखेर शिव मन्दिरहरूमा लिंगदर्शनका लागि लाइन बस्छौं । असोजमा लोग्नेलाई आफूभन्दा ठूलो ‘दर्जा’ को मान्छे ठानेर उसबाट टीका थाप्छौं र खुट्टामा ढोग्छौं ।
एक वर्षभन्दा बढी भयो– महिलाको कमजोर सामाजिक सुरक्षाको स्थितिबारे लामो लेख लेख्न खोजेको । तर, त्यसका लागि अत्यावश्यक तथ्यांक चाहिंदा पनि प्रिन्ट वा अनलाइनमा आएका बलात्कारका अधिकांश समाचारका शीर्षकबाहेक अरू पढ्न सकेको छैन । किनकि बलात्कारका समाचारसँग मलाई मनोवैज्ञानिक समस्या छ । त्यसको बीभत्सता सम्झेर भित्रसम्म कहाली लाग्छ, एकदुई दिन होइन कैयौं दिन । छोरी भएर जन्मेर आफ्ना लागि सधैंभरि बिहान घाम नचर्कुन्जेल र सूर्यास्तपछिको समयमा अघोषित कफ्र्यु लागेको समाजमा हुर्कें । किशोरावस्थादेखि आजसम्म घाम झलमल नहुन्जेल घरबाट निस्कन नसकेको र साँझ परेपछि हाँप र झाँप गर्दै घर फर्केको भन्दा खासै फरक कुरा याद छैन । आज छोरीकी आमा छु, उसमाथि पनि सनातनदेखि चलिआएको अघोषित कफ्र्यु जारी छ । आफैंले पनि उसमाथिको यो कफ्र्युमाथि नचाहेरै पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छु । किनकि उसलाई सुरक्षित राखेको छु भन्ने मेरो भ्रमलाई जिउँदो राख्ने यत्ति एउटा उपाय छ । पुस्तौं बित्दा पनि उस्तै रहिराख्ने यो डरको शृंखला डरलाग्दो छ ।
‘बलात्कार त हिम्मत नभएकाहरूको मात्रै हुन्छ,’ जस्तो आशयले लेखिएका पोस्ट, लेख वा बलात्कारबाट बच्ने आत्मरक्षाका टिप्सहरूले झनै बिथोल्छन् । झोलुंगोमा सुतेकी दूधे बच्चीले कसरी देखाउने हिम्मत ? बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थितिकी किशोरीलाई केही महिनाअघि मात्रै गाडीका चालक–सहचालकहरूले पन्ध्र दिनसम्म कैदमा राखेर पालैपालो बलात्कार गरेको समाचार पढियो । कोठामा थुनेर, पिसाबसमेत बोतलमा गर्न लगाइएर पचासौंपटक बलात्कार गरिएकी उनले कसरी अपनाउने आत्मरक्षाका टेक्निक ? उल्टो उनले भएभरको हिम्मत प्रयोग गरेर भागेर जसलाई घरसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गरिन्, उसैले अघाउन्जेल बलात्कार गर्‍यो र फेरि पहिलो बलात्कारीलाई नै बुझाइदियो । समाज हिम्मतिला र बलियाबांगाको मात्र होइन । दौडिन, भाग्न, झगडा गर्न नसक्ने बालिकाको, बोल्नै नसक्ने, प्रतिरक्षा गर्नै नसक्ने शारीरिक–मानसिक विकलांग र दृष्टिविहीनहरूको पनि हो । उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । प्राध्यापक चन्द्रा भद्राले आफ्नो निबन्ध ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ मा लेखेकी छन् ‘बलात्कार महिलाको शरीरमाथिको निकृष्ट अपमान हो ।
बलात्कारीले महिलाको छाती, नितम्ब, योनी मात्र होइन आत्मविश्वास र आत्मामा समेत प्रहार गर्छ’ (हेर्नुहोस्, द काठमान्डु पोस्ट ३ अप्रिल २०१५) महिनौं–वर्षाैं एकअर्कासँग अन्तरंग रहेका पार्टनर वा पतिपत्नीबीच कसैले नदेख्ने गरी हुने यौनसम्पर्कमा समेत व्यक्त हुने असहमति र असहजतालाई सम्बोधन गर्ने (वैवाहिक बलात्कारसमेतको) कानुन भएको देशमा बस्ने हामीले बलात्कारबारे हलुका टिप्पणी कसरी गर्न सक्छौं ? सार्वजनिक ठाउँहरूमा कसैले शरीरमा छुँदा कैयौं दिनसम्म दिगमिग लाग्ने अनुभव हामीले वर्षाैंदेखि गरिरहेका छौं । यस्तोमा हामी खुला सडकमा, खेतमा, बिनाकुनै गोपनीयता, धेरै व्यक्तिहरूले कसैको शरीरमाथि बिनाअनुमति, भौतिक आक्रमणको साथमा गर्ने यौन आक्रमणको सघनता महसुस गरेर बोल्छौं होला कि नगरीकन ?
हरेक दिनजस्तो भइरहेका बालिका बलात्कारका घटना हेर्न–सुन्न आजकल रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिका कुर्नुपर्दैन । मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हरेक दुई मिनेटजस्तोमा हेर्दिन भन्दा पनि आँखैमा ठोक्किन आइपुग्छन् । यस्तोमा जब ११ वर्षकी छोरी आफ्नो ६ कक्षाको विज्ञान किताबमा भएको स्त्री प्रजनन प्रणालीको पाठका चित्रहरू देखाएर प्रश्न सोध्छे त्यतिखेर बलात्कारका घटनाले लगाउने कहाली कैयौं गुणा बढ्छ । आफ्नो शरीरका अंगहरूसमेत चिन्न नभ्याइसकेका बालिका आफूमाथि यो जघन्य हिंसा कसरी सहँदा हुन् भन्ने कुराले उकुसमुकुस हन्छ । ती आमाबाबुले छोरीको क्षतविक्षत मृत शरीर कसरी उठाएर लैजाँदा हुन् जसले मैले जस्तैगरी तेल घसेर हुर्काएका होलान्, बोकेर खाना पकाएका होलान्, राति उनीहरूको पिसाबको ढापमा आफू सुतेर उनीहरूलाई ओभानोमा सारेर जतनसाथ सुताएका होलान्, सामान्य बिरामी हुँदा पनि रातभरि जागा बसेका होलान्, कुन लुगा लगाउँदा मेरी छोरी कत्तिकी राम्री वा ठूली देखिई भनेर जति बेर हेर्दा पनि नअघाएका थिए होलान् । यस्तैयस्तै थुप्रै कारणले अरू बेलामा कथित भद्रताको सीमामा रहेर बहस गर्न नजान्ने ‘गालीगलौजवादी फेमिनिस्ट’ को सांकेतिक दर्जा पाएकी म यौनहिंसाका समाचार नपढी, सेयर नगरी र सामाजिक सञ्जालमा नबोली बस्छु । ‘अति’ नहुन्जेल चुपचाप हेर्छु कि नबोल्नेहरूलाई कसकसले कसरी धिक्कारेका र सरापेका छन् । संवेदनशील बन्ने नाममा थाहै नपाई पीडितका बीभत्स तस्बिर पोस्ट गरेर अरूलाई संवेदनाहीन गाली गरिरहेका छन् । सराप्नेमा केही प्रतिष्ठित विद्युतीय र प्रिन्ट मिडियाका सञ्चारमाध्यममा आबद्ध (पुरुष र महिला) पत्रकारसमेत छन् । अरूले पहल गरेर मिडियामा ल्याइदिएका घटनामाथि बारम्बार प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यस्ता घटना दिनहुँ किन, कसरी हुन्छन् र स्त्रीलिंगीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कसकसले कहाँकहाँबाट के–के गर्न सकिन्छ भनेर आफूले ‘फुलटाइम’ काम गर्ने सञ्चारमाध्यममा साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक बहस चलाउन चाहेमा उनीहरू मजाले सक्छन् । तर, नबोल्नेहरूको तेजोब्ध गर्दै ट्विटरमा दुईचार गाली पोस्ट गरेर ‘जिम्मेवारी पूरा गर्नुु’ जत्तिको सजिलो भने पक्कै नहोला त्यो काम ।
तीन वर्षअघि यसैगरी लगातार बालिका बलात्कार र हत्याका शृंखलाबद्ध समाचार आएका थिए । बाराकी सात वर्षीया पूजा साह र अन्य बालिकाको बलात्कार र हत्याको विरोधमा देशभरि निस्केका र्‍यालीमध्ये एउटामा मपनि सहभागी थिएँ । र्‍याली सुरु हुनुअघि अग्रभागमा रहेका व्यक्तिहरूले ब्यानर समातेर मधुर मुस्कानको साथ फोटो खिचाएको देखेर त दिक्क लागेकै थियो । पछाडिका केही सहभागीहरूले आफ्नो अगाडिका सहभागीलाई वैशाखको चर्को घाममा समेत छाता ओढ्न दिएनन्, ‘बन्द गर’ भने । किन रैछ भनेको अगाडि छाता
ओढ्नेहरूले छेकिदिएर र्‍यालीलाई ‘सुट’ गरिरहेका टेलिभिजन क्यामरामा आफू नदेखिएला भनेर रैछ भन्ने थाहा पाएपछि विरक्तिले सीमा नाघ्यो । र्‍यालीमा पूरै हिंडें तर त्यसपछिको सभाका कुरा नसुनी घर फर्कें । व्यक्तिगत रूपमा म बलात्कारका समाचार किन पढ्दिनँ, अनलाइनमा सेयर गर्दिनँ र तिनका बारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया किन दिन्नँ भनेर माथि लेखिसकें । तर, अधिकारको बारेमा बोल्ने–लेख्ने भएकाले यस्ता घटनाका समाचार आउनासाथ प्रत्येक पटकजस्तो नामै किटेर, पीडितको सिरिंग हुने फोटै हालेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘कता छस् ? किन बोल्दिनस् ?’ भनेर अपमानित गर्ने हिसाबले पनि बारम्बार सोध्छन् । विशेषगरी ट्विटरमा गरिने कटाक्ष यति भयानक बनेको छ कि ट्रोलहरूको कुरै छोडौं, जिम्मेवार भनिने व्यक्तिहरूबाट समेत डलर र युरोमा बिकेकी वा ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिस्ट’ करार नगरियोस् भन्नका लागि मनभरि कहाली बोकेर पनि बोल्नैपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
‘भिजिबिलिटी’ अर्थात प्रदर्शित हुनु यति महत्त्वपूर्ण बनेको छ, यहाँ आफ्नै सहयात्रीहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा ‘साथीको लिस्टबाट निकाला हुने’ चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न पनि बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हामीले हिसाबकिताब राख्न थालेका छौं, कुन घटनामा को कति मिनेट, घण्टा वा दिनपछि बोल्यो वा बोलेन । त्यसको आधारमा धम्की दिन थालेका छौं वा ढिला बोलेकोमा माफी माग्नसमेत थालेका छौं । सामाजिक सञ्जालकै दसौं माध्यम छन् । हाम्रो खाता नभएको कुनै अर्को सञ्जालमा कोही बोल्यो होला । कोही मेसेन्जरमा बोल्यो होला, कोही एसएमएसमा, कोही फोनमा वा कोही चियागफमा बोले होलान् । वा कोही ज्यान जोखिममा राखेर फिल्डमा काम गरिरहेका होलान् तर, सामाजिक सञ्जालमा चुप होलान् । जसरी धनगढीमा कार्यरत साथी सरिता पुरीले गएको शनिबार बिहानै ‘मलाई फोन गर’ भन्ने म्यासेज पठाइन् र फोन गरेपछि मिडियामा नआएका बालिका बलात्कारका अरू भयानक घटना सुनाइन् जुन घटना भोगेका परिवार मिडियामा आउन चाहँदैनन् । ‘दिमागले कामै गरेन, कोसँग भनौं कोसँगजस्तो भयो’ भनेर फोनमा भनेकी उनी दोषीमाथि उजुरी दर्ता गर्न वा उपचारसमेत गर्न नमान्ने सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई बालिकाहरूको उपचारका लागि दबाब दिन खटिएकी छन् तर हरेक दुई मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारविरुद्ध पोस्ट लेखेर बसेकी छैनन् । त्यसैले हामी आफू आबद्ध सञ्जालमै कोही बोलेको नदेख्दैमा उसमाथि सजायको घोषणा कसरी गरिदिन सक्छौं ? को कुन घटनामा कहाँ र कति घण्टा, दिन महिना वा वर्षपछि बोल्यो वा बोलेन भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई कसरी हुन्छ र हामी निर्णायक बनेर फैसला सुनाउन सक्छौं ? कोही मौन रहनुमा पनि उसका पचासौं अरू कारण होलान् । कसैको मौन रहने अधिकारको सम्मानसमेत गर्न नसक्ने हामीले आफूलाई अधिकारकर्मी वा अधिकारवादी कुन नैतिकताका आधारमा भन्नु ?
मेरै कुरा गर्दा केही वर्षअघि एक जना अभिनेत्री र अर्की सामाजिक कार्यकर्तामाथि पत्रपत्रिकामा अनर्गल टिप्पणी भइरहँदा यो ठीक होइन भनेर कैयौं चियागफमा भनेको थिएँ । त्यतिबेला ‘राष्ट्रिय’ मिडियामा लेख्न सुरु गरिसकेको थिइनँ । सामाजिक सञ्जालमाथि अहिलेजस्तो पहुँच पनि थिएन । कसैगरी मैले त्यो कुराको पक्षमा राष्ट्रिय भनिने मिडियामा लेख्नै चाहे पनि ती दुवै व्यक्तिलाई नभेटी, जानकारी नलिई लेख्न मिल्दैनथ्यो जसका लागि म काठमाडौंमा नबस्ने कारणले सम्भव थिएन । यसको अर्थ उनीहरूमाथि जे भयो म त्यसको पक्षमा थिएँ भन्ने होइन । सामाजिक न्याय, समानता, विभेद र हिंसामुक्त समाजको अधिकारका लागि लाखौं व्यक्ति एकैसाथ हिंडिरहेको यो शताब्दियौं लामो र विश्वव्यापी ‘परेड’ मा कसैले सबैभन्दा पछिल्लो लहरमा आएर आफ्नो पाइला मिसायो भन्दैमा उसलाई ‘हामी उहिलेदेखि यति हिंडिसक्यौं, तँ पछि आएको’ भनेर लाञ्छित र लज्जित गर्ने अधिकार हामीलाई कसरी हुन्छ ? बोल्ने–लेख्ने सार्वजनिक फोरमहरूसम्म कसको पहुँच पहिला पुग्यो भन्नेजस्ता महत्त्वहीन कुराको दहलफसल किन जरुरी ? जबकि यो ‘भिजिबिलिटी’ भन्दा पर गएर प्रश्न गरिनुपर्ने विषय अरू नै छन् ।
समाजको संरचनाले महिलालाई सिकार र पुरुषलाई सिकारीको रूपमा चित्रण गरेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने र महिला भनेका तल्लो दर्जाका लिंग हुन् भन्ने आशयले निर्मित अनगिन्ती उखान, टुक्का, गीत र पूर्वीय वा पाश्चात्य विद्वान्का उद्धरणले हाम्रो चेतन अवचेतनमा वर्षाैंदेखि शासन गरेका छन् । ‘कलियुगको बेलामा जोसमा हुन्न होस, उनकै छोरी तरुनी हामीलाई उल्टै दोष’, पाँच वर्षअघि यौनहिंसाकै बारेमा एउटा लेख लेख्ने सिलसिलामा (हाम्रो पनि हो साँझ परेपछिको संसार— कान्तिपुर २०७० मंसिर १९) सोध्दा मानवशास्त्री सुरेश ढकालले उल्लेख गरेको यो गीत महिलामाथि हुने हिंसाबारे बोल्दा–लेख्दा म सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याउँछु । ढकालका अनुसार देशको सरकारी सञ्चारमाध्यमले वर्षौंसम्म घन्काएको यो अत्यन्त लोकप्रिय गीतले महिला जवान हुनु नै कुनै पुरुषलाई उसमाथि हिंसा हुन छुट हुनु हो भनेर स्पष्ट भनेको छ । आजसम्म पनि हिंसामा पर्ने महिलालाई रातिराति वा एक्लै हिंडेकाले भनेर गरिने टिप्पणीले यसैलाई पुष्टि गर्छन् । स्त्रीलाई सिकार र पुरुषलाई सिकारी ठानिने मनोविज्ञानको सिलसिला पुरानो हो आज त रोकिइसक्यो भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । रेखा थापाजस्ती ‘हिम्मतवाली’ अभिनेत्री/निर्माताले बनाएको फिल्म ‘काली’ को ‘स्लोली स्लोली’ गीतको एउटा अन्तरामा केटाले भन्छ, ‘फुरफुर फुरफुर फुरफुर फुरफुर नगर पुतली, चाल पाउली जालैमा परेसि ।’ अर्कोमा भन्छ, ‘गनगन गनगन गनगन गनगन नगर गौंथली, छेउमै छु देखिनौ सिकारी ।’ ब्लकबस्टर बनेको यो गीतमा कसरी महिलाको व्यक्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्ने हिंस्रक धम्की दिइएको छ भनेर हामीले सायदै याद गरेर स्ुन्यौं । पुरुषलाई बलशाली र महिलालाई ‘अबला’ साबित गर्ने यस्ता गीत, उखान, उद्धरणका अरू अनगिन्ती उदाहरण छन् । बलात्कारको कच्चापदार्थ पुरुषलाई सर्वोच्च बनाइएको सामाजिक संरचना हो भनेर हजारौंपटक बहस भइसकेको छ । जुन सर्वोच्चतालाई अदालतका न्यायाधीशसमेतले पालना गर्छन् ।
बहसमा नपरेका, प्रश्नको घेरामा नआएका प्रसंग पनि छन् । लिंगको सर्वोच्चतालाई बिनाप्रश्न सदर गर्नमा हामीजस्ता ‘आधुनिक र सचेत’ महिला नै तँछाडमछाड गरेर लागेका छौं । यो साउनमा दुईथरी अनौठा संयोग एकैसाथ घटिरहेका छन् । एकातिर दिनहुँजस्तो बालिकाहरूमाथि बलात्कार र हत्याका समाचार र अर्कातिर हरिया लुगा र चुरा लगाएर साना छोरीहरूको हात समातेर शिवलिंगलाई अँगालेर फोटो खिचाउने हामीहरूको ताँती समानान्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । रंगरंगका अनलाइन पोर्टलमा हरिया रंगका चुरा र लुगाको महात्म्य छापिएकै छन् ‘हरियो चुरा लुगाले सर्पको टोकाइबाट बचाउँछ’ वा ‘तिम्रो लागि होइन आफ्ना लागि लगाएकी हुँ’ भन्ने थरिथरी रंगका बहानाको साथमा । न हाम्रा आमाहरूलाई महिनाअनुसारका रंग बदलेर लुगा लगाउन पुग्थ्यो न यो साउनमा जति (हिन्दु) नेपाली महिलालाई सर्पले टोकेको छ उनीहरू हरिया लुगा चुरा नलगाएर हो भन्ने कुनै
प्रमाण छ ।
यो ‘उनको नाममा’ लगाउने लुगा, चुरा र हातमा मेहन्दीले लेखिएको उनको नामले ‘उन’ कै सर्वोच्चतालाई सदर गरिरहेको छ भन्ने हामी थाहा पाएर पनि पाउन चाहँदैनौं । किनकि बजारको मोहनीमन्त्रले लठ्याएर हामीलाई आफ्नै चेतनालाई समेत साउनको भेलमा बगाउन पछि नपर्ने बनाएको छ । लगभग दशकअघि मात्र भित्रिएको यो फेसनको ‘वकिल’ बनाएको छ ।
बिहान बलात्कारीको लिंगछेदन गरौं भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्किसकेपछि हामी दिउसो शिवलिंगलाई अँगालो हालेर फोटो खिच्छौं र बेलुका फेरि उही नाराको साथमा हाजिरी जनाउँछौं । लिंग भनेको सर्वोच्च हो, पूजा गर्नलायक हो भनेर छोरीहरूलाई सिकाइसकेपछि हामी छोरा नभएर बाबुको किरिया गर्नबाट रोकिएकी छोरीको समर्थनमा स्टाटस लेख्छौं ।वंश र अंशमाथि छोरीको अधिकारको वकालत गर्न पनि भ्याउँछौं । भदौमा फेरि लोग्नेको लामो आयुुको लागि व्रत राखेर शिव मन्दिरहरूमा लिंगदर्शनका लागि लाइन बस्छौं । असोजमा लोग्नेलाई आफूभन्दा ठूलो ‘दर्जा’ को मान्छे ठानेर उसबाट टीका थाप्छौं र खुट्टामा ढोग्छौं । समानान्तर रूपमा बलात्कारविरुद्ध लेख लेख्ने वा जोडतोडले स्टाटस ठोक्ने काम पनि बिराउँदैनौं । एकै समयमा हामीले गरिरहेको लिंगको सर्वोच्चताको सदर र बलात्कारको विरोध विरोधाभाषी छन् कि छैनन्, यी सबै गतिविधिले स्त्री भनेको पुरुषभन्दा सानो, कमजोर र पुरुषलाई खुसी पार्ने जात भनेर जनाउँछ कि जनाउँदैन भनेर अब हामीले आफ्नै चेतनालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
दिशा मोड्न सकिन्छ
एक वर्षअघिसम्म असाध्यै स्त्रीद्वेषी टिप्पणीसहितका ट्विटलाई सदर गरेको जस्तो लाग्ने केही साथीहरू अहिले ट्विटरमा हेर्दा फरक देखिन्छन् । हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा उनीहरूको ऐक्यबद्धता छ भन्ने कुरा हाम्रा लेख र ट्विटमाथि उनीहरूका प्रतिक्रियाहरूबाट थाहा हुन्छ । आफूले उनीहरूमा देखेको यो परिवर्तन असाध्यै सुखद लाग्छ र उर्दूको प्रसिद्ध उखान ‘सुबह का भूला अगर शामको घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते (बिहान बाटो बिराएर हराएको मान्छे बेलुका घर फर्कियो भने हराएको ठहरिंदैन)’ को याद आउँछ । महिलामाथि हुने हरेक खालका हिंसाका घटना र विभेदयुक्त टिप्पणीको विरोधमा आफू आबद्ध राजनीतिक दल, जात, वर्ग, लिंग र समुदायको घेरा तोडेर विरोध गरिरहेका महिला वा पुरुष देख्दा कम्तीमा सामाजिक सञ्जालमै सही एउटा ‘क्रिटिकल मास’ को उपस्थिति छ भन्ने कुराले आशावादी बनाउँछ ।
संसारका जति पनि देशमा महिलाको अवस्था उन्नत छ वा त्यहाँका कानुनहरू महिलामैत्री छन् भनेर हामी पढ्छौं–सुन्छौं ती देशहरू त्यस्तो हुनुमा त्यहाँका सबै जनसंख्या असाध्य अहिंस्रक र महिलामैत्री भएर त पक्कै होइन होला । शिक्षामा, सामाजिक व्यवहारमा र कानुनहरूमा ती देशहरूले अपनाएका प्रगतिशील प्रावधानहरूका कारण होलान् । ती सबै चीजको व्यवस्था गर्नका लागि नीतिनिर्माण तहमा मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेका व्यक्तिको उपस्थितिले पनि सम्भव भयो होला । हाम्रो देशमा यो सबै छैन । उल्टो महिलाको संविधानप्रदत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समेत ट्याउँट्याउँ भनेर पर हुत्याउन सक्ने व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । जघन्य बलात्कार गरेकोमा दोषी ठहरिएकालाई खुला छोडिदिने न्यायाधीशहरू छन् । हिंसाको पृष्ठभूमि बनाउन अप्रत्यक्ष जिम्मेवार साहित्य, संगीत वा सार्वजनिक टिप्पणी बन्द हुनेगरी कसैको सोच परिवर्तन हुन लामो समय लाग्ला । तर, यो परिवर्तनको दिशामा बहसलाई मोड्ने काम भने तुरुन्तै गर्न सकिने काम हो । कुनै हिंसाका घटना हुनासाथ एनजीओमा दस बाह्र हजारको जागिर खाने कर्मचारीलाई पत्रकारले सत्तोसराप गर्नु समाधान होइन होला । बरु यसरी काम गरिरहेका एनजीओ अब जरुरी छन् कि छैनन् भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने बहसका शृंखला सञ्चालन गर्नु समाधान हुन सक्ला जसले उनीहरूलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छ । महिला (अधिकारकर्मी) ले कसैलाई कसैमाथि यौनहिंसा गर्न पठाएका र हिंसा हुँदाहुँदै देखेर चुप बसेका हुँदैनन् । त्यसैले हिंसाको बारेमा उनीहरूलाई गाली गर्न खर्चिने आवाजलाई हिंसाविरुद्ध कडा र कार्यान्वयनमुखी कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाका लागि बोल्नतिर मोड्न्ु बढी प्रभावकारी होला । सञ्चार र सञ्जालको उपलब्धताले हामीलाई घटनामाथि प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ । त्यो कुनै नराम्रो कुरा भएन तर सुरक्षित समाजको पृष्ठभूमि तयार पार्ने दिशामा कम्तीमा हामी लेख्न/बोल्न जान्नेहरूले बहसलाई मोड्न सक्नु झन् बढी राम्रो कुरा होला । बहसको दिशा मोड्न चाहने ‘भुला’ हरूलाई हिंसाविरुद्धको यो विश्वव्यापी परेडमा स्वागत छ ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १०:१९